नाम जोडियो पलसँग बिहे डाक्टरसँग, फाल्गनु २९ मा आँचलको बिहेFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । चर्चाकी नायिका हुन् आँचल शर्मा । निकै लामो समयदेखि नायक पल शाहसँग उनको नाम जोडेर प्रेम सम्बन्धका कुरा बाहिर आए । दुबै जनाले मिल्ने साथी मात्र भएको दावी गरिरहे । कतिपय मिडियाले प्रेम सम्बन्धमा रहेको ठोकुवा गरेपनि दुबैले मायामा नभएको र राम्रो सम्बन्धको साथी मात्र रहेको बताउँदै आएका थिए ।
अन्तत यो कुरालाई नायिका आँचल शर्माले पुष्टि गरिदिएकी छिन् । उनले आउँदो फाल्गुन २९ मा डा. उदिप श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने मिति तय गर्दै पलसँग प्रेम नभएको पुष्टि गरेकी हुन् । पलको तर्फबाट प्रेम थियो या थिएन त्यो यी दुबैलाई थाहा होला अझ पल लाई नै थाहा होला ।
बुढानिलकण्ठमा रहेको होटल पार्क भेन्यूमा आँचलको बिबाहको रमझम हुने पारिवारीक स्रोतले बताईएको छ । यस्तै बिबाहको दोश्रो दिन फागुन ३० गते आँचल र उदिपले पाँचतारे होटल हायतमा रिसेप्सन पार्टी दिन लागेको पनि बताईएको छ ।
फिल्म नाई नभन्नु ल ४ मा पल शाहसँगै अभिनयमा डेब्यु गरेकी आँचलले दर्जन बढि फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । सयौंको हाराहारीमा उनले भिडियोमा कम गरेकी छिन् । फिल्मबाट जति चर्चामा आए उनी त्यति पल शाहसँग नाम जोडिएकै कारण आएकी थिईन् ।
हालै ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित ‘झिँगेदाउ’ फिल्म सकाएकी आँचल अहिले ईन्गेजमेन्ट पछि बिहेको तयारीमा जुटेकी छिन् । उनले अहिले कुनै फिल्म वा भिडियोमा काम गरेकी छैनन् । बिहे पछाडी वातावरण अनुकुल बनाएर फिल्ममा फर्कने उनको सोच छ । बिहे पछाडी पल शाहसँगै उनलाई देख्न सकिएला की नसकिएला भन्ने दर्शकमा कौतुहलता बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दिलिपसँग प्रियंका हाँस्न थालेपछि (गीत)
फिल्मी फण्डा । किरण केसी समूहले हाँस्य कलाकार शिवहरी पौडेलसँग मिलेर निर्माण गरिएको फिल्म लक्का जवानको दोश्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । एक पछि अर्को हाँस्य कलाकारहरुको समूह विभाजन भईरहेको अवस्था र सबै क्रमश फिल्म निर्माणमा जुटिरहँदा यी समूहले भने फिल्म ‘लक्का जवान’ निर्माण गरेका हुन् ।
‘लक्का जवान’नलाई शिवहरी पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको पहिलो गीत यस अघि नै सार्वजनिक भईसकेको छ । ‘लक्का जवान’ को दोस्रो गीत ‘मुसुक्कै हाँसन’ माया बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा बाबुल गिरीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा जुना रिजाल काफ्ले र बाबुल स्वयंको गायन छ ।
कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा फिल्मका कलाकारहरु दीलिप रायमाझी, प्रियंका कार्की, सलोन बस्नेत र वर्षा सिवाकोटी प्रस्तुत छन् । गीतमा दिलिप रायमाझिसँग प्रियंका कार्की र सलोन बस्नेतसँग बर्षा शिवाकोटी मुसुक्कै हाँसिरहेको देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा कमेडी जनराको फिल्ममा कमेडी कलाकारसँगै अन्य कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ । फिल्ममा किरण केसी, शिवहरी पौडेल, राजाराम पौडेल, सुशील पोखरेल, सरोज खनाल, अञ्जु महर्जन, अनुसुयषा श्रेष्ठ, सुरेन्द्र केसी, जयनन्द लामा, सविता गुरुङलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ ।
ध्रुव दत्त र अनुसुयषा श्रेष्ठको प्रस्तुती रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा किरण केसी, दीलिप रायमाझी र शिवहरि पौडेल छन् । ‘लक्का जवान’ को सह–निर्मातामा सुशील अर्याल, राजाराम पौडेल, राज केसी, सुरेन्द्र केसी, दीपेन्द्र खनियालगायत छन् ।
‘आमा बंगलामुखी फिल्म प्रोडक्सन’ को ब्यानरमा बनेको फिल्मले केही पाका उमेरका मानिसहरुको कथा भन्ने बताइएको छ । चलचित्रमा बरिष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अथिती भूमिकामा छन् । चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद शिवहरी स्वयंको हो । फिल्म चैत्र २१ गतेबाट नेपालभर रिलिज हुनेछ ।